u-Zondo ulungele i-A Triangular Series enenselelo
Ukapteni we-South Africa ‘A’ one-day, uKhaya Zondo ubheke ikhilikithi yezinga eliphezulu ezobe ikhona emavikini ambalwa azayo njengoba belungiselela ukubhekana ne-India ‘A’ kwi-Tri-Angular Series yabo e-Groenkloof ePitoli ngoLwesithathu.
Iqembu lasekhaya lizophinde lidlale ne-Afghanistan ‘A’ emqhudelwaneni, ozodlalwa kusukela ku-July 26 kuyela ku-August 8, amaqembu amabili aphezulu azongena kwi-final e-Assupol Tuks Oval.
Iqembu lase-South Africa, libuya kwi-tour ephoxile e-England, lizolandela imidlalo ngokudlala ne-India kwimidlalo emibili yezinsuku ezine.
“Kuyajubulisa ukuthi siphinde sihlangane,” kusho u-Zondo. “Kwakukuhle kithina ukuthi sihambe siye e-England kodwa kungcono kakhulu ukuthi sibuyele kwisimo sethu.”
“Sidlale imidlalo emibili yokuzilolonga futhi ama-wicket ebemahle e-High Performance Centre, sithemba ukuthi azofana kwi-series.”
“Sinabadlali abaningi ababekhona kwi-tour yokugcina, abadlali abasha, kodwa okuhamba phambili eqenjini kusafana. Kubangcono uma sikhuluma ngeqembu.”
Liqinile iqembu lasekhaya futhi liphethe abadlali bomhlaba njengo-Farhaan Behardien, u-Beuran Hendricks, u-Reeza Hendricks, u-Mangaliso Mosehle, u-Dane Paterson, u-Aaron Phangiso, u-Dwaine Pretorius no-Tabriaz Shamsi.
Iqembu lase-India nalo lihlanganise iqembu elinabadlali abadlala ezingeni eliphezulu. Ukapteni wabo u-Manish Pandey, kanye nabadlali abafana no-Karun Nair no-Jayant Yadav.
u-Zondo uthi bazobe behlose ukunqoba umqhudelwano.
“Sinezinhloso ezifanayo, sifuna ukunqoba i-series, ukubona abadlali bekhula futhi nokubona abadlali befunda, ukuze balungiselele ukuba abadlali bomhlaba ngelinye ilanga,” kusho u-Zondo.
Ukapteni wama-Hollywoodbets Dolphins uphinde wakhuluma ngesipiliyoni sokudlalela i-South Africa nge-High Performance level.
“Sengidlale kuma-series amathathu futhi kukusiza ekukhuleni,” esho enezelela. “Uzithola usezimeni ezihlukile futhi kuyithuba ongeke ulithole uma udlala ikhilikithi yama-domestic kuphela. Ngakho kuyakusiza njengomdlali wekhilikithi futhi kutshengisa abantu abadlala indima kwikhilikithi ngamakhono akho kanye nendlela osebenza ngayo uma ubhekene nencindezi ihlukene ngoba kungaphezulu kwekhilikithi yama-domestic.”
Powerade South Africa A one-day squad (to play in triangular against Afghanistan A and India A): Khaya Zondo (Hollywoodbets Dolphins, capt), Farhaan Behardien (Multiply Titans), Junior Dala (Multiply Titans), Henry Davids (Multiply Titans), Beuran Hendricks (bizhub Highveld Lions), Reeza Hendricks (bizhub Highveld Lions), Heinrich Klaasen (Multiply Titans), Mangaliso Mosehle (bizhub Highveld Lions), Wiaan Mulder (bizhub Highveld Lions), Dane Paterson (WSB Cape Cobras), Aaron Phangiso (bizhub Highveld Lions), Dwaine Pretorius (bizhub Highveld Lions), Tabraiz Shamsi (Multiply Titans), Jason Smith (WSB Cape Cobras), Jon-Jon Smuts (Warriors)
Iqembu le-SA A lemidlalo emibili yezinsuku ezine bedlala ne-India A izobuye ibizwe.
Audio and video featuring Khaya Zondo, Shukri Conrad, India coach Rahul Dravid and Afghanistan coach, Raees Ahmadzai can be located on the FTP site below.
Zondo ready for challenging A Triangular Series Smuts replaces Markram in SA A one-day squad Afghanistan A to replace Australia A in Triangular Series Fortuin earns call-up to SA A Four-Day Squad England Lions take comprehensive victory Overton wickets dents South Africa 'A' prospects Kuhn hits century before SA A suffer middle-order setback We are better prepared for Lions - Zondo Conrad disappointed with how South Africa ‘A’ beaten South Africa A suffer heavy defeat Bavuma shines as South Africa ‘A’ struggle